Sahara Andrefana: Tany misy vanja nandratra mpanao fihetsiketsehana dimy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2018 3:30 GMT
Ny herinandro lasa teo, nijoro ho firaisankina manoloana ny berm (“Rindrin'ny Henatra”) izay naorina teo anelanelan'i Maraoka sy Sahara Andrefana, izay itakian'i Maraoka fiandrianam-pirenena, ny Saharawis sy Espaniola. Nandritra ny hetsi-panoherana, izay nantsoina hoe Diabe Iraisampirenena manohitra ny Rindrin'ny Henatra, niteraka ny faharatran’ ireo Saharawis marobe (isa tsy voamarina) ny tany misy vanja .
Bilaogera Sahara Ocidental, monina any Tindouf, dia iray amin'ireo bilaogera miresaka momba io tranga io. Talohan'ny nanokanana azy, nanoratra ity bilaogera ity hoe:
Espaniola mpitsidika an-jatony no nandany ny ora hariva tamin'ny alakamisy tamin'ny fiomanana farany tamin'ny diaben'ny fihetsiketsehana sy firaisankina eo anoloan'ny rindrina namboarin'ny Maraokana izay manasaraka an'i Sahara Andrefana ho roa.
Nokarakaraina ny sakafo, feno ny harona, ary nisy ny fivoriana fanentanana natao mba hahazoana antoka fa vonona ho amin'ny hetsika amin'ny Zoma ireo mpandray anjara rehetra, nokarakaraina sy narindran”ny Firaisambe Nasionalin'ny Vehivavy Saharawi (UNMS).
Nanolo-tena ireo Espaniôla 300 ireo fa hanao dia adiny roa, saingy an-jatony maro hafa – avy any Alemaina, Italia, Grande-Bretagne, Etazonia, Frantsa, Aotrisy, Portiogaly, El Salvador, Meksika ary any amin'ny firenen-kafa – no hiaraka amin'izy ireo. haneho ny fanoheran'izy ireo ny fibodoan'ny Maraokana ny ao Sahara Andrefana sy ny sakana ara-batana napetraka teo amin'ireo mpitsoa-ponenana Saharawi akaikin'i Tindouf, Alzeria, ary ny fianakavian'izy ireo mbola mipetraka ao amin'ny faritany bodoin'i Maraoka.
Nilaza ilay bilaogera avy eo fa nandritra ny hetsi-panoherana, Saharawis dimy no naratra rehefa nanitsaka vanja tampoka ny olona iray 19 taona:
Saharawis dimy no naratra tao Rouss Essabty tamin'ny zoma, 70 km miala ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Saharawi, raha nanitsaka tamin'ny tany misy vanja ny tovolahy iray 19 taona.
Nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana milamina manohitra ny rindrina Maraokana izay mampizara ny Sahara Andrefana ireo niharam-boina, niaraka tamin'ireo Saharawis 3 000 hafa sy mpikatroka iraisam-pirenena, .
Nitranga ny fipoahana rehefa niezaka nanatona ny rindrina ireo niharam-pahavoazana dimy tamin'ny alàlan'ny fanadiovana ny lalana tamin'ny sakana fefy vy manodidina izany, izay fantatry ny Saharawis ho Rindrin'ny Henatra. Nandalo ny tany misy vanja niaraka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana 300 hafa mahery ny telo tamin'ireo niharam-boina, Ibrahim Hussein Abait, Hamdi Fadli Adbelahi ary Mohamed Salim Bouda Larossi, .
Naratra mafy i Ibrahim, avy ao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Saharawi ao Dakhla, tapaka ny tongony havia nandritra ny fipoahana. Hamdi sy Mohamed kosa naratra kely, may ary voapitiky ny vanja ny tarehy, ny sandry sy ny lamosin'izy ireo.
Ny volana Febroary, Saharawis roa no namoy ny ainy rehefa nipoaka ny tanim-banja. Sahara Andrefana dia fantatra amin'ny fananan'izy ireo tanim-banja tavela tamin'ny Ady Lehibe faharoa.